Diyopost.com :: सल्यान्टारमा पानीको हाहाकार : ५५ लाखको खानेपानी ‘डिप बोरिङमै भ्रष्टाचार ! सल्यान्टारमा पानीको हाहाकार : ५५ लाखको खानेपानी ‘डिप बोरिङमै भ्रष्टाचार ! - Diyopost.com
सल्यान्टारमा पानीको हाहाकार : ५५ लाखको खानेपानी ‘डिप बोरिङमै भ्रष्टाचार !
धादिङ, २६ भदौ । धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालीका १ सल्यान्टार दुई ठूला नदीहरु बुढी गण्डकी र आँखुको बीचमा अवस्थित छ । तर, दुवैतिरबाट ठूला नदीले घेरिएको सल्यान्टारमा भने खानेपानीको हाहाकार छ । सल्यान्टार नजिकै पानीको मुहान नभएको भने होइन तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा स्थानियहरु एक गाग्री पानीका लागि एक विहान हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
सल्यान्टारको वडा नम्बर १ मा रहेको पाँनधारेमा एक विहान हिँडेर एक गाग्री पानी ल्याउनुपने बाध्यता उनीहरुमा छ । ‘एक गाग्री पानी लिन जानलाई बिहानभरी लाग्छ’, एक स्थानीयले दुःख पोख्दै भने,–‘हामी जस्ता उमेर ढल्केकाहरुलाई त झन यो उकालो हिड्न सारै गाह्रो छ ।’
कुमाल र दराई समुदायको बाहुल्य रहेको सल्यान्टारमा पटक–पटक विकास योजनाहरु परेपनि त्यसको कार्यन्वयनको पाटो भने चित्तबुझ्दो छैन । पानीको निक्कै हाहाकार भएसँगै गाउँपालिकाको सक्रियतामा केही महिनाअघि नै पाँचधारे डिल भन्ने ठाउँबाट ‘डिप बोरिङ’को काम सम्पन्न भयो ।
केही महिनाअघिदेखि नै ४० लाख रुपैयाँको लगानीमा ‘डिप बोरिङ’ मार्फत खानेपानी तानिएको भएपनि स्थानीयले भने पिउन त के देख्न समेत पाएका छैनन् ।
डिप बोरिङमा ४० लाख, पाईप खरिद र मिटर जडानका लागि भन्दै गाउँपालिकाले थप दिएको १२ लाख र ६५ घरधुरीबाट ५/५ हजारका दरले उठाईएको ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ खानेपानिमा खर्च भएको छ । तर घरघरमा पानी भने झर्न सकेको छैन । उसै त सँधै पानीको हाहाकारा मच्चिने सल्यानटारमा खानेपानी निर्माण र वितरणमा अनियमितता र आलटाल हुँदा सल्यानटारबासी आक्रोसित भएका छन् ।
डिप बोरिङ पास गर्दा पैसाको चलखेल !
गाउँपालिकाको ४० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च भएको यो डिप बोरिङ पास गर्नका लागि कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको खुलेको छ । कर्मचारीहरुले ४ लाख रुपैयाँ घुस लिएर योजना पास गरेको एक स्थानीयले बताए । उनले नाम नभन्ने सर्तमा दियोपोष्टलाई भने,–‘कर्मचारीले घुस नखाईकन काम नै नगर्ने भयो भनेर एकजना कर्मचारीले नै मेरै अगाडी भने, उनले मेरै अगाडी ४ लाख रुपैयाँ घुस खान्देको खुलासा समेत गर्न भ्याए ।’ अर्को कुरा, डिप बोरिङको लागि ४० लाख रुपैयाँ नै नचाहिने बोरिङ कम्पनीहरु बताउँछन् ।
घरघरमा वितरण गरिएको पाईप गुणस्तरहीन !
डिप बोरिङबाट पानी तानिएको महिनौँ बितिसक्यो । तर पानि घरघरमा पुर्याउने सपना भने अधुरा छन् । घरघरमा पानि पुर्याउनका लागि पाईप बिछ्याउने काम भएको त छ, तर पानि लैजाने पाईप भने कमसल छ । पाईप खरिदका लागि भनेर गाउँपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ छुट्टै रकम छुट्याएको छ । वडा नं. १ को पानधारे डिलदेखि कोष ढुंगासम्म मिटर सहितको पानी पुर्याउनका लागि बिछ्याईएको पाईप उपभोक्ताको घरघरमा नपुग्दै बिग्रन थालिसकेको छ । अर्का एक स्थानीयले भने,–‘खानेपानी घरमा नपुग्दै पाईपहरु बिग्रन थालिसक्यो, गुणस्तरीय पाईप हाल्ने भनिएपनि कमसल पाईप हालेर जनतालाई ठग्ने काम भएको छ । यसमा सरासर आर्थिक चलखेल भएको छ ।’
स्थानीयसँग ३ लाख २५ हजार असुली !
खानेपानि उपभोक्ता समिति मार्फत आयोजनाको पाईप बिछ्याउने काम भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ओम प्रकाश सुवेदीले बताए । उनले सबै कामको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई दिएको र लगानीको २० प्रतिशत स्थानीय उपभोक्तासँग उठाईएको दियोपोष्टलाई जानकारी दिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीको भनाई अनुसार स्थानीयले २ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हो । तर, उठाईयो ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ । प्रमुख प्रसासकीय अधिकृतको हिसाब नमिल्नुमा पनि आर्थिक हिनामिना भएको प्रष्ट देखिन्छ । पानि ट्याँकीदेखि कोष ढुंगासम्म मीटर सिस्टममा खानेपानि वितरणको लागि भन्दै गाउँपालिकाले नै १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको अवस्थामा स्थानीय सर्वसाधारणसँग ६५ घरधुरी बराबर ५ हजार रुपैयाँका दरले ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ । उपभोक्ताले यसको चर्को विरोध गरिरहेको छ ।
जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई, काम सप्तरंगीलाई
अधिकृत सुवेदीले उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम अघि बढाईएको बताएपनि सप्तरंगी निर्माण सेवालाई कामको जिम्मा दिएको खुल्न आएको छ । उपभोक्ता समिति आफैँले निर्माणको जिम्मा पाउँदा पाउँदै सप्तरंगी निर्माण सेवालाई यसको जिम्मेवारी किन दिईयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सप्तरंगीले निर्माण जिम्मा लिएपनि त्यसको जस भने उपभोक्ता समितिलाई नै जान्छ ।
कांग्रेस वडाध्यक्षको यस्तो बद्मासी !
कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष भोज बाहदुर रिजालले डिप बोरिङ आयोजनामा बदमासी गरेको पाइएको छ । वडाध्यक्ष रिजालले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित सप्तरङ्गी निर्माण सेवालाई मनोमानि हिसाबले टेन्डर दिएपछि उक्त कम्पनिले कमसल खालका पाइप र ‘च्यानल बक्स’ खरिद गरेर निर्माण थालेको थियो । वडाध्यक्षले ५ लाखभन्दा माथिको टेन्डर गर्न नपाउने नितिगत व्यवस्था रहेको थाहा पाएपछि रिजालले काम सम्पन्न भएपछि मित्र सिलवालकाे नेतृत्वमा उपभोक्ता समिति बनाएर रकम भूक्तानीका लागि माग गरेका थिए ।
‘काम सम्पन्न भइसकेपछि अर्को टेन्डर आह्वान गर्दा समस्या हुने देखियो । फेरी अर्को समिति बनाएर नै भूक्तानी लिएको हो,’ त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु थापाले भने,‘प्रविधिको कुरा हामीलाई पनि थाहा हुँदैन । पानीमा गुणात्मक नभएपछि हामीले लामो समयसम्म भूक्तानी रोकेका हौँ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले उक्त खानेपानी आयोजना शुरु गर्नुभन्दा अघि प्राविधिक स्टिमेट समेत नभएको बताए ।
‘वास्तवमा भन्दा त्यो आयोजनामा पहिले नै हुनुपर्ने प्राविधिक स्टिमेट भएको थिएन । वडाध्यक्षले सम्झौता गरेर सामान झारेर काम सम्पन्न गर्नु भएको हो । पछि भूक्तानी लिनका लागि अर्को स्टिमेट तयार पारिएको हो,’ थापाले भने,‘जसरी पनि प्राविधिकले कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । गाउँलेको डेलीगेशन पनि थियो ।’
स्टिमेट माग्दा प्राविधिक नै मोबाइल स्विच गरेर फरार !
त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा कार्यरत इन्जिनियर राम शरण अधिकारीले दियोपोस्टसँग मंगलबार १० बजे भित्र उक्त खानेपानी आयोजनाको प्राविधिक स्टिमेट उपलब्ध गराउने बताएका थिए । तर, १० बजे उनको मोबाईल नम्बर ९८४१६४१६७४ मा सम्पर्क गर्दा ‘स्विच अफ’ गरिएको थियो । गाउँपालिका कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले समेत उक्त खानेपानी पानी आयोजनामा किर्ते गरेका छन् ।
यसैबीच त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालीका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर रिजालले दियोपोस्टमा प्रकाशित समाचार प्रति खण्डन गरेका छन् ।
यसअघि प्रकाशित समाचारमा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष मित्र सिलवाल हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ।